Guix 1.2: အထုပ်အပိုးစီမံခန့်ခွဲမှုကိရိယာတပ်ဆင်ခြင်းသင်ခန်းစာ။ Linux မှ
Guix 1.2 - အထုပ်အပိုးစီမံခန့်ခွဲမှုကိရိယာတပ်ဆင်ခြင်းသင်ခန်းစာ
ဒီပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထည့်သွင်းရမယ်ဆိုတာမြင်ရလိမ့်မယ် Guixတစ် ဦး ပိုင်ထိုက်သောနှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ tool ကိုသို့မဟုတ် အထုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်။ ကျွန်ုပ်တို့အများစုသိကြသည့်အတိုင်း package စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (manager) သည်အသုံးဝင်သောကိရိယာများစုဆောင်းခြင်းဖြစ်သည် အလိုအလျောက် ဖြစ်စဉ် packages များတပ်ဆင်ခြင်း, update ကို, configuration များနှင့်ဖယ်ရှားရေး software ၏။
ဤအပလီကေးရှင်းအမျိုးအစားတွင်, ၏ အထုပ်မန်နေဂျာ၊ များသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်များသောအားဖြင့်အခြားအသုံးများသောအရာများကိုသိပြီးအသုံးပြုကြသည်။ apt-get, တတ်လွယ်ခြင်း, apt, pacman, yumအခြားသူများများထဲတွင်။ Guix, များသောအားဖြင့်လူသိနည်းသည် GNU Distro အမည်တူ။
ဒီ post မှာတော့၎င်း၏ခေါင်းစဉ်ကိုပြောပါတယ်အဖြစ်ကျနော်တို့သာအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ် Guix 1.2 installation ကို တစ်ခုကျော် GNU / Linux Distroအထူးသ MX Linux ကို 19.3သို့သော်အနည်းငယ်ပိုမိုသိလိုသူများအတွက် Guix သင်နှင့်သက်ဆိုင်သောကျွန်ုပ်တို့၏ယခင်ဆက်စပ်စာပေများကိုသင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ သို့သော်အောက်ပါကိုမှတ်သားထားသင့်သည် Guix:
1 Guix အကြောင်းအခြေခံအချက်အလက်များ
2 Guix 1.2: တပ်ဆင်ခြင်းသင်ခန်းစာ
2.1 Guix 1.2 ကိုအဆင့်ဆင့်တပ်ဆင်ခြင်း
2.1.1 ခြေလှမ်း 1
2.1.2 ခြေလှမ်း 2
2.1.3 ခြေလှမ်း 3
"Guix ကို package manager အဖြစ် Guile Scheme language ဖြင့်ရေးပြီး Nix package manager ကိုအခြေခံသည်။ GNU Distribution အနေဖြင့်၎င်းတွင်အခမဲ့အစိတ်အပိုင်းများသာပါဝင်ပြီး GNU Linux-Libre kernel ပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းမှာအခမဲ့မဟုတ်သောပစ္စည်းများနှင့် binary firmware မှသန့်စင်ထားသည်။" ပထမ ဦး ဆုံးတည်ငြိမ်သော Guix 1.0 ကိုဖြန့်ချိခဲ့ပြီး၎င်းသည်၎င်း၏သတင်းများဖြစ်သည်
"Guix သည်ပုံမှန်အထုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ဆောင်ချက်များအပြင်၊ အရောင်းအဝယ်ဆိုင်ရာမွမ်းမံမှုများလုပ်ဆောင်ခြင်း၊ အသစ်ပြောင်းခြင်းများကိုပြန်လည်လှိမ့်ခြင်း၊ superuser အခွင့်ထူးများမရရှိဘဲလုပ်ဆောင်ခြင်း၊ သုံးစွဲသူတစ် ဦး ချင်းနှင့်ဆက်စပ်သော profile များကိုအထောက်အပံ့ပေးခြင်း၊ ပရိုဂရမ်တစ်ခု၏ဗားရှင်းအမျိုးမျိုးကိုတစ်ပြိုင်တည်းတပ်ဆင်နိုင်ခြင်းစသည့်အင်္ဂါရပ်များကိုထောက်ပံ့သည်။ များစွာသောအခြားလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအကြား။" Linux ဖြန့်ချိခြင်းနှင့်အထုပ်မန်နေဂျာ Guix 1.2 ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
Linux ဖြန့်ချိခြင်းနှင့်အထုပ်မန်နေဂျာ Guix 1.2 ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
GNU Guix 1.1 package manager ၏ဗားရှင်းအသစ်ကိုစာရင်းပြုစုပါ
ပထမ ဦး ဆုံးတည်ငြိမ်သော Guix 1.0 ကိုဖြန့်ချိခဲ့ပြီး၎င်းသည်၎င်း၏သတင်းများဖြစ်သည်
Guix 1.2: တပ်ဆင်ခြင်းသင်ခန်းစာ
Guix 1.2 ကိုအဆင့်ဆင့်တပ်ဆင်ခြင်း
သင့်ရဲ့ကမ်းလှမ်း tutorial ကိုအောက်ပါ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်အထူးသ၎င်း၏ စပိန်ဘာသာဖြင့်တရားဝင်လက်စွဲစာအုပ်နှင့်သူ၏အခန်း၌တည်၏ «Binary installation ကို«အချို့သောသူများအတွက်လက်စွဲဖြစ်စဉ်သည်အလွန်ရှည်လျားပြီးခက်ခဲနိုင်သည်ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်မှုကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်။
မှတ်ချက်ဖြေ - ဒီအချိန်မှာလုပ်ငန်းစဉ်ပြတ်တောက်သွားပြီး၊ နောက်တခါထပ်လုပ်ဖို့အောက်ပါ command ကိုကွပ်မျက်လိုက်တယ်။
ဤအချက်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်ဆုံးအဆင့်ကိုထပ်မံလုပ်ဆောင်သည် ./guix-install.sh ပြီးတော့ငါတို့ဆက်လုပ်သည်
ယခုထိ install လုပ်ပြီးဖြစ်သည် Guixသို့သော်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင်အောက်ပါအမှားပြင်ဆင်ချက်ကိုပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်၊ နတ်ဆိုးသို့မဟုတ် Guix ဝန်ဆောင်မှု (guix-daemon) package များကို install လုပ်ခြင်းကဲ့သို့သောအချို့သော command များကိုလုပ်ဆောင်နိုင်စေရန် တောင်းဆိုထားသော packet ကို (glibc-utf8-locales သို့မဟုတ် glibc-locales).
လက်စွဲ၌, အပိုင်း၏အဆုံးမှာ 2.4.1 ပတ်ဝန်းကျင် setup ကိုတည်ဆောက်ပါ အောက်ပါအောက်ခြေမှတ်ချက်တစ်ခုတွင်ဖော်ပြထားသည် -
"အကယ်၍ သင်၏စက်သည် systemd boot system ကိုအသုံးပြုပါက၎င်းဖိုင်ကိုရှေ့ဆက် / lib / systemd / system / guix-daemon.service သို့ / etc / systemd / system သို့ကူးယူပါက guix-daemon သည်အလိုအလျောက်စတင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ အလားတူစွာသင်၏စက်သည် Upstart boot system ကိုအသုံးပြုပါက၊ ဖိုင်ကို prefix / lib / upstart / system / guix-daemon.conf သို့ / etc / init သို့ကူးယူပါ။".
ငါပြောခဲ့သကဲ့သို့ငါအထူးသဖြင့်အမှု၌, စမ်းသပ်ဖို့ငါဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် ကိုယ်တိုင်နှင့်ဂရပ်ဖစ် Guix ၏ Demon ကို run ပါအောက်ပါအတိုင်းဖိုင် explorer မှ -
အခုဒီမှာရှိတဲ့ငါမှာရှိတဲ့ command အားလုံးကို execute လုပ်နိူင်တယ် Guix Package Managerအောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း -
ဒီကနေ Guix အကြောင်းဖတ်၊ ဖတ်မယ်၊ ဖတ်မယ်၊ စပိန်ဘာသာဖြင့်တရားဝင်လက်စွဲစာအုပ် လိုအပ်ပါက စပိန်ဘာသာစကားဖြင့်အွန်လိုင်းအကူအညီအပိုင်း ၎င်း၏ဝဘ်၏။
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" မည်သို့တပ်ဆင်ရန်မည်သို့ «Guix»အထူးသဖြင့် အထုပ်စီမံခန့်ခွဲမှု tool ကို, ထိုနာမကိုအမှီအောက်, အဆင့်မြင့်ကတည်းက GNU ဖြန့်ဖြူးခြင်း ကတီထွင်ခဲ့သည် GNU စီမံကိန်း အသုံးပြုသူများ၏ကွန်ပျူတာလွတ်လပ်ခွင့်များကိုလေးစားကြောင်း၊ တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Guix 1.2 - အထုပ်အပိုးစီမံခန့်ခွဲမှုကိရိယာတပ်ဆင်ခြင်းသင်ခန်းစာ
XtraDeb - Ubuntu အတွက်အကောင်းဆုံးနှင့်အက်ပလီကေးရှင်းများ PPA သိုလှောင်ခြင်း
Sidekick - ပိုမိုကောင်းမွန်သောအွန်လိုင်းလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအတွက် Web browser